INingizimu Afrika isinosuku lukaWendy Williams | Scrolla Izindaba
INingizimu Afrika isinosuku lukaWendy Williams
Kusukela manje, umhla zi-10 kuMbasa usuku lukaWendy Williams.
Ekhuluma ohlelweni iWendy’s After Show, uWilliams uthe umsakazi odumile u-Anele Mdoda abenomhlangano naye umtshele ukuthi lolu kuzoba usuku lwakhe.
UWilliams ukhulume noMdoda mayelana nefilimu yakhe ezayo iWendy Williams kanye ne-biopic ezokhonjiswa ku-Lifetime Africa mhla zi-10 kuMbasa.
UMdoda ungene ku-Twitter ekhuluma ngamahlebezi okuthi utshele uWilliams ukuthi unosuku lwakhe abekelwe lona eNingizimu Afrika.
Ubhale ku-Twitter wathi: “Yebo impela kunjalo, yimina engitshele uWendy Williams lokho ngoba kuliqiniso.”
Uphinde wabhala ku-Twitter ezintatha zangoLwesithathu ekuseni, ethi: “mhla zi-10 kuMbasa. [email protected] izokhombisa ifilimu ka#WendyWilliams kanye ne-doccie! Uyazi ukuthi uzobe uyibuka. Ingxoxo yami noWendy izodlala ohlelweni lwami lomsakazo ngayizolo bese uzwa ngoWendy kanye neWilliams Day #AneleandtheClub.”
Abantu baseNingizimu Afrika bakuthathe njengehlaya lokhu ngemuva kokuthi uMdoda ekhohlise uWilliams ukuthi uneholidi lakhe kwelakuleli. Yize kungahle kube nokungaqondi okuncane okuvela kuWilliams, abantu baseNingizimu Afrika bavele baphela insini ngesikhathi bezwa lokhu.
Umthombo wesithombe: @AneleMdoda